Thola isitayela se-rustic chic sekhaya lakho | Bezzia
USusana Garcia | 07/06/2021 20:00 | Umhlobiso, Amathrendi wokuhlobisa
El Isitayela se-rustic chic sithandwa kakhulu kulezi zinsuku, ingxube enkulu yezicucu ze-rustic nezanamuhla, i-vintage neyamanje. Ukuqhathanisa kuyindlela enhle yokuhlobisa, ngoba ngale ndlela asinamatheli kuphela kwisitayela esisodwa futhi sakha izinto ezihlukile nezikhethekile. Kuhlala njalo kungcono ukuxuba izitayela uthole ikhaya elinobuntu kunekhophi yesitayela esithile esingakhathala.
El isitayela se-rustic chic isitayela senoveli esifuna ukusinika ukuthinta okuhle kakhulu futhi eyinkimbinkimbi ezindaweni ze-rustic. Lezi zinhlobo zezindawo zikhuthazwa yizwe, izikhala ze-rustic, lapho kunezinto ezibukeka zimbi nezicucu ezisebenzayo, kepha ukuthintwa kwe-chic kuyayisiza ekuvuseleleni nasekufezekiseni ubuhle obukade buntuleka kwesinye isikhathi.
1 Izinto zemvelo
2 Imibala ekhanyayo nemvelo
3 Faka izimbali nezitshalo
4 Ifenisha yesitayela saseFrance
5 Imabula nobumba
I-Los izinto zemvelo ziyingxenye eyisisekelo yesitayela se-rustic, ngakho-ke asikwazi ukwenza ngaphandle kwabo. Izinkuni ezisefenisha, i-rattan, obhasikidi be-wicker ngisho nezicucu zamatshe zilungele ukudala lowo moya we-rustic ongangeza kuwo ukuthinta kwe-chic kamuva. I-rustic kumele ibe yi-protagonist, njengoba kuyisitayela esiyisisekelo. Ifenisha yokhuni imvamisa indala noma ine-rustic, ukubukeka okuqinile ngaphandle kwemihlobiso eminingi kakhulu. Phansi ngokhuni noma ngamatshe nakho kusetshenziswa kaningi. Ngakolunye uhlangothi, kuzinsiza eziningi kusetshenziswa i-wicker, namabhasikidi noma iragi kule nto enhle enjenge-rustic.
Imibala ekhanyayo nemvelo
Ngalesi sitayela, a thinta okwakamuva kakhulu ezindaweni ze-rustic. Amathoni wokukhanya asisiza ukuthi sinciphise lokho okuthinta i-rustic, ngoba izindawo zangaphambilini zazinokhuni oluningi olumnyama namathoni aqinile acishe amakamelo. Kulokhu sibheka izithunzi ezifana nabamhlophe, izimpunga futhi ikakhulukazi ama-beige akhanyayo, athambile futhi ahlinzeka ngemfudumalo. Kulolu hlobo lwemvelo akwenzi mqondo omkhulu ukubheka izingcezu zombala omningi, ngoba endaweni ye-rustic imvamisa ayikho.
Faka izimbali nezitshalo
Lo I-rustic inokuningi okuphathelene nezindawo ezisemaphandleni nemvelo, ngakho-ke ezinye izitshalo azikwazi ukulahleka kulezi zikhala. Kulezi zinsuku, izitshalo zithathwa kakhulu endlini, izitshalo ezinkulu nezincane, ukudala amakhona akhethekile. Umqondo ukwengeza ukusha okusha nombala ngezitshalo. Bheka izimbiza ezinhle ngemibala ekhanyayo noma engeza izimbiza ze-wicker.
Ifenisha yesitayela saseFrance
Yize sikhulume ngamaphoyinti asiholela kwisitayela se-rustic, kufanele futhi sicabange ngokwengeza ukuthinta okuhle kakhulu. Ungakwazi lokhu kufaka phakathi ifenisha ethile ngesitayela saseFrance. Lesi sitayela sinefenisha emiswe enemininingwane eminingi, enesinondo futhi enemilenze eqoshiwe. Ukungeza ifenisha eyodwa noma ezimbili zalesi sitayela kungaphezu kokwanele ukudala ukuthinta okuthe xaxa. Ngaphezu kwalokho, isitayela sokuvuna siyingxenye yezingcezu zaseFrance ngakho-ke sizobe sakha isimo esikhetheke kakhulu.
Izinto ze-Rustic zivame ukuba zimbi futhi zingahlobene. Kepha ukwakha indawo enhle kakhulu singangeza ezinye izinhlobo zezinto zokwakha. I- imabula yinhle kakhulu yingakho isetshenziswa kulezi zindawo. Kungaba ucezu lwendawo yomlilo, isitifiketi semabula noma ngisho nokuthinta ngaphezulu kwefenisha. IMarble yinhle, ikakhulukazi uma sikhetha imibala enjengempunga nokumhlophe. Ngakolunye uhlangothi, i-ceramic nayo inakho lokho kuthinta okuhle, ngakho-ke singakufaka emininingwaneni emincane efana nama-vases noma amanani wokuhlobisa. Ngemininingwane emincane ungabona ukuthintwa okuyinkimbinkimbi.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Ungahlobisa kanjani ngesitayela se-rustic chic